विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा… - Milan Limbu - Journalist
विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा…
मिलन लिम्बू शनिबार, २७ बैशाख, २०७७, दिउँसोको ०३:२८ बजे
गाग्रोमा आधा पानी, छचल्कीएर हैरान । आधा ज्ञानजस्तै । वितण्डाको हद । ‘अर्ध’ अर्थात अर्धज्ञानीहरूको नग्ननृत्य सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल । असंख्यक फेसबुक प्रयोगकर्ताको जन्म दिन जनवरी ‘एक’मा पर्छ ! लाग्छः सबैका बुबा आमाले सल्लाह गरेरै जनवरी ‘एक’मा सन्तान जन्माउन एकै समयमा संम्भोग गरेका हुन ! कुरा त्यसो होइन । विक्रम संवत्मा आफ्नो जन्म दिन थाहा भए पनि इस्वी संवत्मा रूपान्तरण गर्न नजान्दाको परिणाम सबैका बुबाआमाले एकै समयमा सम्भोग गरेझैँ । कुरा त्यसो पनि होइन । असंख्य प्रयोगकर्ता आफैले फेसबुक अकाउन्ट खोलेका होइनन् ! कसैलाई खेताला लगाएर खोलिएका फेसबुक अकाउन्टमा प्रयोगकर्ताको जन्मदिन जनवरी ‘एक’मै पर्नु स्वभाविक । खेतालालाई पनि विक्रम संवत्बाट इस्वी संवत्मा रूपान्तरण गर्नु के कर ? जन्म दिन जनवरी एक ठोकिदिए आनन्दै । फेसबुकले विक्रम संवत् नबुझ्नु र अकाउन्ट खोल्न नजान्नु संयोग मात्रै होला !
विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा… यो लयमा ‘थाङ्बेन–मेन्छ्या’को संख्या धेरै छ ।
अकाउन्ट खोल्नै खेताला । परिणाम ‘इङ्गेजमेन्ट वीथ फलाना एण्ड अदर पोर्टीफाइभ’ स्वभाविक ? एकैपटक ४६ जनासँग इङ्गेजमेन्ट ? दुनियाँमा नौलो । यस्तै–यस्तै तमासाले फेसबुकमा युद्ध जित्नुछ । चारित्रिक प्रमाणपत्र विद्यालयलाई माग्नु पर्दैन । फेसबुक टाइमलाइन काफी । जहाँ ‘म श्रीमान वा श्रीमतीसँग सेक्स गर्दैछु’ भनेर लाइभ गर्न बाँकी छ । ‘डीएम’ अर्थात डाइरेक्ट म्यासेज वा सेक्रेट ग्रुपच्याटमा सम्भोगीय ‘सर्दम’ प्रस्तुति नौलो भएन । त्यसैलाई भन्दा हुन ‘च्याट सेक्स’ । सर्दम प्रस्तुति बेला–बेला महाप्रस्थानको कारण पनि बन्छ र मात्रै नत्र, सब ठिक ! विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा… यो लयमा ‘थाङ्बेन–मेन्छ्या’को संख्या धेरै छ ।
सामाजिक सञ्जालः जान्नेका लागि स्वभाविक श्रीखण्ड, जान्न नचाहनेका लागि मुस्लो ! मुस्लोः आ–आफ्नै सृजनशीलतामा बुझौं । सञ्जाल प्रयोगकर्ताको औला अचाक्ली अराजक । कसैले ‘मेरा बा महाप्रस्थानमा’ लेखिदिए पुग्यो । श्रद्धाञ्जली हैन बुढिऔला प्रयोग हुन्छ ! यो पनि तरिका हो ? मतलब, तेरो बाउ मरेको मलाइ मन प¥यो ! दाजुबहिनीले चेली–माइती क्याप्सन सहित तस्वीर पोष्ट गर्दा पनि ‘नाइस कपल’ लेख्नेको कुरा बेग्लै । वैवाहिक जीवन सफलताको कामना गर्नेको त कुरै नगरौं । यसको मतलव शिकारीहरूको बिगबिगी । जता पनि शिकार मात्रै देख्छन् । वनजंगल मासियो । शिकारी हराए भन्नु चाहिँ गलत होला । किनकी, शिकारीको संख्या घट्दो होइन बढ्दो छ । सञ्जालमा शिकारी कति हो कति । खुब ‘हन्टिङ’ चल्छ । हन्टर–हन्टरको मन मिलेपछिका परिणाम आफै कल्पना गर्नुुस् । विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा… यो लयमा ‘थाङ्बेन–मेन्छ्या’को संख्या धेरै छ ।
फेसबुकः गज्जबको ओकल्ने थलो । जहाँ जे ओकले पनि हुन्छ । ‘सोमरस’को मात्र बढि भएपछि ओकल्नेहरू सामान्य सावित हुन्छन् ‘अर्ध’हरूको सामुन्ने । अर्धहरू कसैले बोलेको आधा सुन्छन्, आधाको आधा अर्थात २५ प्रतिशत बुझ्छन् त्यसपछिको प्रतिकृया कस्तो होला ? २५ प्रतिशत बुझ्नेहरू नै हुन्, सञ्जालमा ओकल्नेहरू ! उनीहरूलाई बुझ्नु छैन । तर, भडास कसैगरी ओकल्नु छ । कसैलाई खुइल्याउनु परे सञ्जालमा ओकल्यो, कसैलाई ज्यू हजुर गर्न परे सञ्जालमै ओकल्यो, पीडा, व्याथा, हासो–रोदन सबै सञ्जालमै ओकल्नुको मज्जा नलिने सायदै होलान् । विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा… यो लयमा ‘थाङ्बेन–मेन्छ्या’को संख्या धेरै छ ।
फेसबुकः खिपेर लेख्नेहरूको कुरा बेग्लै । पट्याउन सिपालु । दुईचार पटक खिपेर लेखेपछि नपटिने कुरै भएन । अरु जेसुकै होस, बिचार जस्तोसुकै होस्, बानी–व्यहोरा जेसुकै होस खिप्नेहरू खतरा हुन् । फेसबुकमा खिप्नेहरूको बेग्लै सत्ता छ । भ्रम नै किन नहोस् खिप्नेहरू केही समय राज गर्छन् ।
ज्यू हजुरी गर्ने उपयुक्त थलो हो । ज्यू हजुरी गर्नेलाई सधै मान सम्मान मिलेकै हुन्छ । स्टाटस् वा तस्वीर जे देखे पनि ‘सारै राम्रो’ लेख्नेहरू ज्यू हजुरी गर्नेका साधक हुन् । जो सधै सबैका लागि प्रीय हुन्छन् । आलोचना गर्नेहरू तालिवानी आक्रमणको शिकार बन्छन् ।
देवत्व वा दानवीकरणकोे मैदान । जहाँ रातारात कसैलाई देवता त कसैलाई दानव बनाइन्छ । पक्षको देवता, विपक्षी दानव ? जहाँ निष्पक्ष दृष्टिकोण सधँै सहिद ! अर्धहरूको तमासा हेर्न गज्जब हुन्छ ।
व्यूटिक्याम समुपयोग गर्नेहरू पहिलो रोजाइमा हुन्छन् । सामान्य नागरिककै रूपमा फेसबुकमा तस्वीर पेस गरेर विस्तारा छिरेकाहरू व्यूझँदा सेलिब्रेटी भइसकेका हुन्छन् । यो स्त्री मित्रहरूका लागि फलिफाप सावित छ । पुरुष मित्रहरू व्यूटिक्यामको कमाल नबुझेर डेटिङ फिक्स गर्छन् । विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा… यो लयमा ‘थाङ्बेन–मेन्छ्या’को संख्या धेरै छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न जाने उपयोगी नजाने घातक । आफुलाई जान्नेको पंक्तिमा राख्नेलाई पनि थाहा छैन कुन कुरा सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने ? आफुलाई पूर्ण ठान्नेहरू आन्तरिक कलह मात्रै होइन, अरुको चरित्र हत्या गर्न सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्छन् । हरेक नित्यकर्म सञ्जालमा पोखेर नग्नता प्रदर्शन गर्छन् । तर, आफूलाई पूर्ण ठानिरन्छन् । विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा… यीनै हुन् अर्ध यीनै हुन ‘थाङ्बेन–मेन्छ्या’ !
विषय वा प्रशंगले गलत अर्थ नलागेमा…सामाजिक सञ्जालमा समाजले पचाउने, सामाजिक सद्भाव विकासमा टेवा पुग्ने, कसैको व्यक्तिगत वा सामाजिक जीवनमा आच नआउने, कसैको मानसम्मानमा ठेस नपुग्ने जस्ता सामग्री मात्रै प्रस्तुत गर्ने ‘थाङ्बेन–मेन्छ्या’को संख्या कम छ । गलतलाई गलत, सहिलाई सहि, ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्दै समाजलाई सहि मार्गनिर्देश गर्ने ‘थाङ्बेन–मेन्छ्या’को संख्या कम छ ।
जिल्ला अध्यक्षहरुसँग छलफल
कविता– वीर्य र वीर–वीरंगाना